Abalimi bacele insangu kungqongqoshe | isiZulu
Abalimi bacele insangu kungqongqoshe
Ukhala ngensangu yakhe usonkondlo ogqekezelwe imoto
Uhlawuliswe u-R70 000 obeshushumbisela insangu kuleli
Owesimame uboshelwe ukushushumbisa insangu eZakheni
Durban - Uphonselwe inselelo mayelana nokulinywa kwensangu uNgqongqoshe wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu-Natal, uThemba Mthembu, ngesikhathi enesidlo sasekuseni nabalimi ngoLwesihlanu eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
UNoa Myawo, onguSihlalo we-Youth In Agriculture and Rural Development, utshele uMthembu ukuthi ukubhekisiswa kodaba lomthunzi wezinkukhu kungaba nomthelela omuhle emnothweni waseNingizimu Afrika.
Ungqongqoshe uhlangana nalaba balimi abaqhamuka ezindaweni ezahluke KwaZulu-Natal nje, ngayizolo uMnyango wakhe ubuwethula isabelomali sawo.
UNyawo uthi ukuba semthethweni kwensangu kungaba nomuhle umthelela njengoba kungeke nje kukhulise umnotho wakuleli kuphela, "kungaphinde kudale namathuba emisebenzi entsheni". Uthi kuyiqiniso elingeke labalekelwa ukuthi insangu iyasiza kwezinye izifo.
"Sekukaningi kuvela ukuthi insangu iwusizo ezifweni ezifana nesifuba nomdlavuza, uma uhulumeni ungakwenza kube semthethweni ukulinywa kwayo, kangingabazi ukuthi lokho kungasiza abantu abaningi baqale amabhizinisi abo.
"Lokhu singakwenza uma kungaba nezikhungo ezisemthethweni okuzothi uma abantu sebeyivunile insangu, bayidayisele zona beseziyisebenzisa ngokubambisana nemigomo yomnyango wezempilo ukuhlanganisa amakhambi angakwazi ukulekelela ekunqobeni lezi zifo.
"Okunye okuhle ngensangu wukuthi kayidingi ukunakekelwa kakhulu ngoba izimilela ngaphandle kokuniselwa. Ngakho siyacela ukuba ibhekisiswe indaba yokugunyanwa kwensangu," kusho uMnu Nyawo.
Ziningi izinto ebeziphakanyiswa ngabantu abebeyingxenye yalesi sidlo, okubalwa kuzona nokuthuthukisa ezolimo ezikoleni zamabanga aphansi. UNkalipho Gumede onguthishanhloko eSilindelo Primary School KwaNyuswa, entshonalanga yeTheku, uthi kuyasiza ukuba izingane zifundiswe ukulima zisemabangeni aphansi ukuze zizokhula zazi kabanzi ngezolimo.
Uthi esikoleni sakhe izingane bazibamba zisencane, kangangoba balima i-spinach basidayisele abasuke bephekela izingane esikoleni. Ekhuluma naleli phephandaba uGumede, uthe lokhu kuwusizo kakhulu ngoba kwenza izingane zikhule kusesegazini ukulima.
"Ukungazikhuthazi izingane zisencane kwenza ishode intsha kwezolimo, ngakho ngicabanga ukuthi uma umnyango wezolimo ungazibophezela ekubambisaneni nathi ekutheni izingane zibanjwe sizencane, kungaba nemiphumela emihle. Emphakathini engiqhamuka kuwona, sinazo izinhlelo ezifana no-One home, One Garden esihlose ngazo ukuba abazali babambisane nezingane, zingagcini nje esikoleni ukuzihlanganisa nezolimo," kusho yena.
UMthembu, uthe vele sebenazo izinhlelo mayelana zokubambisana nomnyango wezemfundo lapho kuzoyiwa khona emabangeni aphansi nasezinkulisa kulekelelwe izingane ngezolimo. Uthi kodwa basazama izindlela zokulukhulisa lolu hlelo ukuze luzoba yimpumelelo.
Uveze ukuthi kulo nyaka umnyango wakhe ubeke u-R200 million ozobhekana nohlelo lukaqedindlala (Food and Nutrition Security) olunezinhlelo ezahlukene okubalwa kuzona i-One Home, One Garden, One-Household- One Hectare, nolwamakhowe. Uthi le mali izosiza nasohlelweni lokuthuthukisa intsha, abesifazane nabaphila nokukhubazeka.
*Abalimi bakhalela insangu nje, kuzokhumbuleka ukuthi ngomhlaka-31 Mashi, iJaji Dennis Davis likhiphe isinqumo eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape esithi ukungavunyelwa ukuba umthunzi wezinkukhu usetshenziswe, kuphambene noMthethosisekelo.
Leli jaji lithe ukunqatshelwa kwabantu ukuba baphathe, bathenge noma batshale insangu emizini yabo bezozisebenzisela bona, kuyaphikisana impela noMthethosisekelo.
Nokho lesi sinqumo kasisho ukuthi bazilime ziye etsheni kwazise umuntu ongatholakala ehuqa umthunzi wezinkukhu angaboshwa kwazise kwasona isinqumo seJaji Davis kusamele sivunywe yiNkantolo yoMthethosisekelo emuba kwalokho isidlulisele ephalamende.
Kuvela ukuthi kungatha cishe iminyaka emibili ukuze iphalamende liguqule imithetho ehambisana nokungavumeleki kwensangu ukuze abasebenzisi bayo bakwazi ukuyiphatha nje ngaphandle kokuxakwa ngabakwasidlodlo.